UKUBUKA AMANZI OKUMANGALISAYO ESIXEKWENI - I-Airbnb
UKUBUKA AMANZI OKUMANGALISAYO ESIXEKWENI
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguKay
INDAWO ENTLE engaselunxwemeni kunye neendawo ezintle zoLwandle lweKorale, iCairns Esplanade kwaye ingaphezulu kweemarike zasebusuku. Ime kwinqanaba lesi-5 kumbindi wesixeko saseCairns apho ungahamba lula kuyo yonke indawo kwimizuzu embalwa, kwiimarike, kwiivenkile zokutyela nakwiindawo zokuthenga. Hamba ngepaki uye kwi-jetty kuzo zonke iindawo zokukhenketha ngamatye okanye usenokukhetha ukuphumla nje kwibhalkhoni uze ubukele umhlaba udlula. I-YOu iza konwabela ukuphumla okungapheliyo.
Sinegumbi lokulala elahlukileyo ngokupheleleyo elinomoya opholileyo oqinisekisa ukulala kwindawo ethe cwaka nepholileyo. Iflethi ikwicomplex engaphambi kwesakhiwo enembonakalo engaphephekiyo phezu kolwandle ehamba neLeeds kwizikhephe kwaye kumgama yiGreen Island emkhenkceni. Iindwendwe ziyivuyela xa zibona le ndawo. Sinendawo yokuphumla enamagumbi aliqela, izihlalo eziyi-4 phandle everandeni, kutshanje siye saphucula ifenitshala ibe yifenitshala entsha emhlophe yale mihla. Ibhedi enkulu itshintshwe ngobukhulu be-Sealy Posturepedic ensemble (itofotofo kakhulu). Lala ebhedini uze ubukele i-telly okanye uthathe i-spa epholileyo kwindawo yakho. I-studio ikwayindawo yokudlala i-DVD edityaniswe ngeTV ukuze ibe nesandi esihle.
4.91 · Izimvo eziyi-254
Sibekwe ngaphezulu kweemarike zasebusuku ezivulwa rhoqo ngobusuku beveki. Kukho inkundla yokutya enkulu kunye neendawo zokutyela ezininzi ezintle apha ngezantsi kwaye kuhambo olufutshane kakhulu. Ichibi elidumileyo lechibi lasimahla libekwe kufutshane nesakhiwo sethu libonelela ngemithambo yasimahla elungiselelwe libhunga lethu lengingqi. Ezi zipapashwa kwiwebhusayithi yazo (URL HIDDEN)
Umbuki zindwendwe ngu- Kay
My husband Ross and myself live in beautiful tropical Cairns. We love meeting people from far and wide and take delight in promoting our wonderful city.
We like to make your arrival hassle free and will arrange access to the apartment that is most suitable.
We like to make…
Ukuba kunokwenzeka sinokudibana neendwendwe zethu ekufikeni kwaye sizise kwindawo yokuhlala. Phendula nayiphi na imibuzo, chaza indawo engqongileyo kunye nalapho ungazifumana khona izinto kwindawo enzima. Thina umnxeba kude ukuba iindwendwe kukho nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo. Ukuba kwishishini kwaye ufuna ukungena okungaqhelekanga oku kufumaneka ngesicelo.
Ukuba kunokwenzeka sinokudibana neendwendwe zethu ekufikeni kwaye sizise kwindawo yokuhlala. Phendula nayiphi na imibuzo, chaza indawo engqongileyo kunye nalapho ungazifumana khona…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cairns